Madaxweynaha Puntland oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay. | allsanaag
Madaxweynaha Puntland oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay.
30th November 2020 admin Category :
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa guulo waaweyn kasoo gaaray safarkiisa muddadii uu ku maqnaa, wuxuuna heshiisyo kala duwan la soo galay dalalkaasi iyo shirkado caalami ah oo u diyaarsan maalgashiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland.
“Waxaan aad iyo aad idiinka mahadcelinayaa soodhawayntii diiranayd ee aad igu soodhawayseen, waxaan sidoo kale Alle uga mahadcelinayaa raxmaddiisa iyo nabadgelyada uu nagu manaystay, safar dheer oo China, Imaaraadka iyo Itoobiya ayaan isku soo maray, waxyaabo badan oo aan filayo in ay horumarka dalka ka qeyb-qaadan doonto ayaan kasoo wada-hadalnay Warbixin balaaran ayaan la wadaagi doonaa dowladda iyo shacabkaba”.
← Mukulaashu meelaha ha iska mirato “Xuduudka SNM wuxuu noqonayaa Laag iyo Ceeldaahir →